ASF u taagan tahay qaabab nidaamka sare iyo waa qaab weel for Windows warbaahinta audio iyo video files ah. Waa qaab caadi ah file u files warbaahinta Windows laakiin waxaa inta badan ma ay taageerayaan software taas oo ah sababta ugu weyn ee sababta aad ugu baahan doonto si aad u badalo qaab kale. Inkasta oo ay jiraan ciyaartoy warbaahinta in si toos ah ciyaari kara ASF audio / video files laakiin in ay la tacaalaan files ASF si hufan, waxaad u baahan tahay inaad marka hore u badalo qaab saaxiibtinimo file sida MP4.
Qeybta 1: ASF Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: ASF Free in Converter MP4
Qeybta 3: Aqoonta Extended ee ASF
Diinta aad file video ka mid qaab in kale waa arrin caadi ah haatan maalmood oo ay jiraan dhawr baakadaha diinta software laga helo suuqa laga yaabo in ay bixiyaan xarunta si dadka isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee haddii aad raadinayso ASF ugu wanaagsan ee MP4 video Converter, markaas Wondershare Video Converter Ultimate waa baakada software kaamil ah oo aad u! Qaar ka mid ah qaababka ugu waaweyn ee ay bixiso Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah:
Software wuxuu taageeraa tiro ka mid ah audio iyo video qaabab file u diinta. In ka badan 150 qaabab file waxaa taageera Wondershare ee Video Converter Ultimate.
Heerka diinta ee software-ka waa sida ugu badan 30 jeer ka dhakhsi badan tartanka suuqa ugu jirta.
The video badaley karo si fudud u gubay inay DVD kaliya button click ah.
Ayaa la gediyay videos yihiin filaayo in qalab aad mobile oo aad u niyad san karaa si cad u ah Madaxweyne Siilaanyo, PSP iwm
Marka laga reebo video / diinta ka maqal ah, waxa kale oo aad ka bedel kartaa videos la Wondershare Video Converter Ultimate. Qaar ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee tafatir sida sixiddiisa, falinjeeerka iyo qoqobada si fudud loo samayn karaa.
An search engine isku dhafan oo ay la socoto Wondershare Video Converter Ultimate aad u saamaxaaya in ay raadiso video aad u jecel yahay oo si dhakhso ah u dejisan oo aan xataa furitaanka biraawsarkaaga.
The feature mid click download waa mid aad u soo jiidasho leh macaamiisha ah. Wondershare Video Converter Ultimate Taageertaa tiro ka mid ah website-yada oo ay ku jiraan video YouTube, Dailymotion iyo vimeo oo ka dhigaysa in ay u fududahay dadka isticmaala si ay u soo bixi videos ka internetka.
Diinta file ASF aad galay MP4 waxaa loo sameeyey si fudud marka aad isticmaalayso Wondershare ee Video Converter Ultimate. Halkan waxay leedahay Hanuuniye tallaabo yar oo xigmad leh ka ASF in aad qaadan doonaa iyada oo loo marayo tallaabooyin diinta si MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Tallaabada 1 Daahfurka software iyo shuban file ASF video in la badaley
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno Wondershare Video Converter Ultimate by double gujinaya ay icon. Marka aad bilaabay software-ka, tallaabada xigta waa in ay ku shuban file ASF in aad rabto in aad si loogu badalo in ay MP4 ah. Waxaad ku shuban kartaa file video ASF in Wondershare Video Converter Ultimate midkood u soo jiiday galay interface ama loo doorto "darto files" doorasho. Gujinaya ah "dari files" doorasho furi doonaa sahamisa daaqadaha aad ka dooran kartaa file la doonayo.
Tallaabada 2 Dooro qaabka wax soo saarka la doonayo
Marka aad ku raran yihiin faylka, tallaabada xigta si ay u doortaan qaab wax soo saarka ah ee faylka ku. Waxaa jira qaar ka mid ah qaabab file ku qoran ee "qaab" tab iyo aad si fudud u dooran kartaa mid ka mid ah. Dooro qaab MP4 liiskan si ay u dejiyaan qaabka wax soo saarka aad ASF file video sida MP4 ah.
Marka aad dooratay qaab faylka, aad haatan ka bedel kartaa file video. Talaabadan waa mid ikhtiyaari ah iyo in aad xitaa waxaa gebi ahaanba ka boodi karaa. Si kastaba ha ahaatee haddii aad file video baahan yahay tafatirka, aad xaalkaa karaa iyadoo la isticmaalayo qalabka tafatirka sare ee Wondershare Video Converter Ultimate.
Marka aad ku qanacsan tahay faylka, waxaad bilaabi kartaa inaad diinta file ASF video ay u MP4. Saxaafadda "badalo" button inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda.
Haddii aad raadinayso ASF si xor ah Converter MP4, markaas Wondershare Video Converter Free waa doorashada ugu fiican aad u! Iyadoo Wondershare Video Converter Free waa la jaan qaada madal Windows, Wondershare Video Converter Free for Mac (duwanaansho ah Wondershare Video Converter Free) waa la jaan qaada Mac.
Wondershare Video Converter Free Waa soomi video software diinta in gabi ahaanba waa bilaa lacag.
Software wuxuu taageeraa sida ugu badan 150 qaabab loogu diinta video.
Marka laga reebo diinta, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo aad xaalkaa videos isticmaalaya Wondershare Video Converter Free.
Wondershare Video Converter Free Ma u fiican yahay sida Wondershare Video Converter Ultimate.
1. Waa maxay ASF?
Qaabab System Sare waxaa caadi ahaan loo soo gaabiyo ASF oo u dhaqmo sida qaab weel for Windows audio warbaahinta iyo video files ah. The qaabab file ugu badan gudahood file ASF ah ku qoran yihiin qaabab file wmv iyo WMA oo si fudud loo ciyaaray kartaa Windows Media Player. Qaab file ASF waxaa shati Microsoft.
2. Sidee u ciyaaro files ASF on Windows iyo Mac?
Wixii nidaamka ka hawlgala Windows, waxaad si fudud u ciyaari karo files ASF isticmaalaya ciyaaryahan Windows Media. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad isticmaasho ciyaaryahan kasta oo kale oo warbaahinta u ciyaaro files ASF, aad u baahan tahay si ay u badalo galay qaar ka mid ah qaab kale.
Wixii nidaamka ka hawlgala Mac, files ASF u baahan yihiin in la beddelay qaar ka mid ah qaab kale oo file caanka ah sida MP3, MP4 ama AVI si ay si sahal ah ciyaari karo by iMovie.
Si kastaba ha ahaatee haddii aad wax ka qabashada qaar ka mid ah files ASF oo ma ku haboon tahay in aad iyaga mar walba loogu badalo, markaa waxaa jira ciyaartoy warbaahinta dibadda sida ASF Video Player oo lagala soo bixi karaa internet ka. Kuwani ASF video ciyaartoyda la jaanqaadaan nidaamka ka hawlgala Mac iyo Windows iyo files ASF aad si toos ah u ciyaari karaa iyaga oo aan u baahan si loogu badalo qaab kasta oo file kale.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan ASF in MP4 on Windows iyo Mac?